Renato Sanches Oo Albaabada U Furay U Dhaqaaqista Arsenal Iyo Liverpool
HomeWararka CiyaarahaRenato Sanches oo albaabada u furay u dhaqaaqista Arsenal iyo Liverpool
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille Renato Sanches ayaa heegan galiyay kooxaha Arsenal iyo Liverpool ka dib markii uu sheegay inuu diyaar u yahay ku biirista Premier League-ga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Portugal ayaa u arka inuu heshiiskiisa kooxda heysata Ligue 1 uu dhacayo 2023, waxaana si weyn loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Premier League bilihii lasoo dhaafay.
Arsenal iyo Liverpool ayaa labadoodaba lagu xamanayaa inay isha ku hayaan ciyaaryahanka khadka dhexe, kaasoo hadda sii hurinaya dabka ku hareeraysan mustaqbalkiisa isagoo si maldahan u sheegay in isbedel muuqaal ah uu dhawaan dhici karo.
Isagoo la hadlayay L’Equipe , Sanches ayaa yiri: “Markii aan imid Bayern, diyaar uma ahayn inaan ka ciyaaro koox noocan oo kale ah, waxaan ahaa mid aad u da’yar
“Maanta waxaan dareemayaa diyaar, si fiican ayaan u fahmay kubada cagta, waxaan leeyahay khibrad dheeri ah, waan garanayaa waxa aan sameeyo si aan uga ciyaaro kooxdan oo kale taas ayaana wax walba badasha.
“Laga yaabee in Milan iyo Arsenal ay xiiseynayaan laakiin ma aqaano, waan la hadlay wakiilkayga, waan ogahay kooxaha wacaya iyo kuwa aan ahayn, laakiin hadda ma sheegi karo, laakiin waan ogahay inaan diyaar u ahay, waan ogaan doonaa waxa ii roon.”
Sanches ayaa kasoo muuqday 23 jeer guushii Lille ee xilli ciyaareedkii 2020-21 Ligue 1 laakiin waxa uu kaliya saftay sideed kulan tartamada oo dhan ilaa haatan xilli ciyaareedkan dhaawac dartiis.